Argagaxisada oo Burburisay Buunadadii ugu weyneyd degmada Qoryooley | SMC
Home WARARKA MAANTA Argagaxisada oo Burburisay Buunadadii ugu weyneyd degmada Qoryooley
Argagaxisada oo Burburisay Buunadadii ugu weyneyd degmada Qoryooley
Waa tallaabo kale, oo maleeshiyaadka argagaxisada ah ku curyaaminayaan dhaqaalaha iyo isu socodka dadweynaha Soomaaliyeed, saaka waaberigii Alshabaab waxaa ay qarax ku burburiyeen buundadii ugu weyneyd degmada Qoryooley oo aheyd mid hal bowle u ah nolashada dadka gobolka gaar ahaan degmada.
Buundadan ayaa loo yaqaanay Buundo Gaduuda waxaa la dhisay 1954 sidoo kale waxaa ay aheyd biyo-xireenka ugu weyn Wabiga Shabelle.
Guddoomiye ku xigeenkii hore, gobolka Shabeelaha hoose, C/fitaax Xaaji Cabdulle, ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay burburinta Buundada degmada Qoryooley isla markaana ah arrin dhaawacaysa isku xirka dadka iyo gaadiidka gobolka.
Qoraal uu soo dhigay, Facebook-ga ayaa Cabdiftaax, ayuu kaga sheekeeyay ahmiyadda buundadan maanta Alshabaab qarax ku burburiyeen.
Ma ahn, markii ugu horeysay oo Alshabaab burburiyeen buundooyinka muhiimka ah gobolka Shabeelaha hoose, hadda ka hor waxaa ay gaari qarax sida ku qarxiyeen buundada deegaanka Bariire oo ilaa iyo hadda aan helin wax dayactir ah.
Dhanka kale, weerar aroornimadii hore, saaka argagaxisada ku soo qaadeen saldhig ciidanka xoogga ku leeyihiin deegaanka Ceel-Saliini ayaa la sheegay in khasaare kala kulmeen argagaxisada.
Saraakiil ka hadashay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in ay iska caabiyeen maleeshiyaad damacsanaa in ay soo weeraraan saldhigga ciidanka.
Meydadka dhowr maleeshiyoo dagaalkii saaka Ceel-Saliini lagu dilay ayay taliska ciidanka xoogga soo bandhigeen, taas oo tusaale u ah jabka argagaxisada ka soo gaaray weerarkii saaka.
Maalintii shalay, ciidanka xoogga dalka ayaa Alshabaab kala wareegay deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada Qoryooley, waxaana kamid ah, Dharsheenley, Bandar, Xero koowaad, Xero labaad iyo deegaanka Farkeerow.
Previous articleDHAGEYSO:-Waxgaradka gobolka Gedo oo fariin adag diray
Next articleMuxuu salka ku hayaa wafdiga ay Itoobiya u dirtay Hargeysa?